BKF Isixhobo sokulungisa. BKF Ukubuyisela isoftware.
DataNumen BKF Repair Ingaba i eyona BKF isixhobo sokubuyisela emhlabeni. Inokulungisa urhwaphilizo BKF iifayile kwaye uphinde ufumane idatha yakho kangangoko kunokwenzeka, ngaloo ndlela unciphisa ilahleko kurhwaphilizo lwefayile.
4.90 / 5 (ukusuka kwiivoti ezili-1,649)
Ngoba DataNumen BKF Repair?
Inqanaba lokubuyisela kwimeko yesiqhelo yimost Inqobo ebalulekileyo ye BKF imveliso kwakhona. Ngokusekwe kuvavanyo lwethu olubanzi, DataNumen BKF Repair unelona zinga lifanelekileyo lokuchacha, ngokufana nokuBuyisa kwakhona, kwaye ingcono kunayo nayiphi na enye into okhuphisana nayo kwintengiso! Njengexabiso le DataNumen BKF Repair ibiza ixabiso eliphantsi kunaleyo yoBuyiselo koGcino, imveliso yethu DataNumen BKF Repair Unelona xabiso liphezulu / umlinganiso wokusebenza.
Funda ngakumbi malunga nendlela DataNumen BKF Repair utshaya ukhuphiswano
ENew Brunswick, NJ, eUSA
Iimpawu eziphambili kwi DataNumen BKF Repair v3.4
Inkxaso yokulungisa BKF iifayile ezenziwe ngeWindows 95, 98, ME, NT, 2000, XP kunye ne-Server 2003 eziluncedo.
Inkxaso yokulungisa BKF iifayile ezenziwe ngeenguqulelo zeVeritas Backup Exec, phantsi kweWindows NT, Windows Server, Netware, OS / 2 okanye iMacintosh.
Inkxaso yokufumana kwakhona idathasethi, ivolumu, isakhiwo sefolda kunye neefayile kwi BKF yogcino.
Inkxaso yokufumana kwakhona uxinzelelo BKF oovimba.
Inkxaso yokulungisa BKF iifayile kwimithombo yeendaba eyonakeleyo, njengediski yefloppy, Zip Iidiski, iiCDROM, njl.
Inkxaso yokulungisa ibatch ye BKF iifayile.
Ixhasa ukubuyisa idathasethi emininzi kunye nevolumu eninzi BKF oovimba.
Inkxaso yokulungisa BKF iifayile ezinkulu njenge-16777216 TB (okt 17179869184 GB).
Akukho malungelo olawulo afunekayo ukubuyisela BKF iifayile.
Inkxaso yokufumana nokukhetha ifayile ye BKF iifayile ezizakulungiswa kwikhompyuter yendawo.
Ukudityaniswa kwenkxaso kunye neWindows Explorer, ke unokulungisa BKF ifayile kunye nemenyu yokuqulathiweyo yeWindows Explorer ngokulula.
usebenzisa DataNumen BKF Repair Ukufumana kwakhona urhwaphilizo BKF iifayile
Xa akho BKF iifayile zonakele okanye zonakele ngenxa yezizathu ezahlukeneyo kwaye awukwazi ukuzibuyisela ngokuchanekileyo, ungasebenzisa DataNumen BKF Repair ukuskena ifayile ye BKF iifayile kwaye ufumane kwakhona idatha eninzi kubo.
Phawula: Phambi kokufumana kwakhona ukonakala okanye ukonakala BKF ifayile nge DataNumen BKF RepairNceda uvale iMicrosoft Backup Utility kunye nezinye iinkqubo ezinokuthi ziguqule ifayile ye- BKF ifayile.
Khetha eyonakeleyo okanye eyonakeleyo BKF ifayile eza kulungiswa:
Ungafaka igalelo BKF igama lefayile ngqo okanye ucofe i iqhosha lokukhangela kwaye ukhethe ifayile.
Ngokuzenzekela, DataNumen BKF Repair uya kubuyisa izinto kwi BKF fayile kwaye uzigcine kulawulo lwe-xxxx_recovered, apho i-xxxx ingumthombo BKF igama lefayile. Umzekelo, kwifayile MyBackup.bkf , Isikhokelo esivelisayo sokukhuphela siya kuba yi-MyBackup_recovered. Ukuba ufuna ukusebenzisa elinye igama, nceda ukhethe okanye usete ngokufanelekileyo:
nqakraza i iqhosha, kwaye DataNumen BKF Repair Ndiza start ukuskena nokulungisa imvelaphi BKF ifayile. Inkqubela phambili yebha
Emva kwenkqubo yokulungisa, ukuba ngaba umthombo BKF ifayile inokulungiswa ngempumelelo, uya kubona ibhokisi yemiyalezo enje:
Ngoku ungavula umkhombandlela i-MyBackup_recovered equkethe zonke izinto ezifunyenweyo kwifayile ye- BKF ifayile.
DataNumen BKF Repair 3.4 ikhutshwa ngoMeyi 4, 2021
DataNumen BKF Repair 2.9 ikhutshwa nge-18 kaDisemba, 2020
DataNumen BKF Repair 2.7 ikhutshwa nge-4 kaNovemba ngo-2020
DataNumen BKF Repair 2.6 ikhutshwa nge-18 kaNovemba ngo-2019
DataNumen BKF Repair 2.5 ikhutshwa nge-16 kaMeyi ka-2019
Inkxaso yokufumana kwakhona uxinzelelo BKF iifayile.
DataNumen BKF Repair 2.2 ikhutshwe nge-17 ka-Agasti ka-2013
Ukuphucula ukuhambelana kwenkqubo entsha yokusebenza yeWindows 7 kunye ne-8.
DataNumen BKF Repair 2.1 ikhutshwa ngo-Disemba 1, 2010
Ukuphucula ukusetyenziswa kwe-GUI.
DataNumen BKF Repair 2.0 ikhutshwa ngo-Epreli 2, 2009
Phinda ubhale isicelo sonke kunye ne-injini yokulungisa.
Lungisa ibug ekuqhubekeni kwamagama efayile.
DataNumen BKF Repair 1.2 ikhutshwa nge-5 kaJulayi, 2006
DataNumen BKF Repair 1.0 ikhutshwa ngoJuni 16, 2005
Isixhobo esinamandla sokufumana kwakhona iMicrosoft backup (BKFiifayile).